Kooxda Juventus Oo Lacag Yar Ku Iibineysa Cristiano Ronaldo.
HomeHoryaalka ItalyKooxda Juventus oo Lacag yar ku iibineysa Cristiano Ronaldo.
March 12, 2021 Horyaalka Italy, Wararka Ciyaaraha 0
Juventus ayaa lagu soo waramayaa inuu la kulmi doono Cristiano Ronaldo si uu ugala hadlo mustaqbalkiisa. Sida ay sheegayaan wararka ka soo baxa Talyaaniga, Old Lady waxay u baahnaan laheyd inay ku iibiso ugu yaraan € 29m haddii ay tahay inay ka fogaadaan khasaare hantiyeed.
Warbaahinta Talyaaniga ayaa su’aalo weydiineysa xiddiga reer Portugal ka dib markii Juventus ay ku guuldareysatay inay u soo baxdo wareega quarter-finalka Champions League xilli ciyaareedkii labaad oo isku xigta.
Sida laga soo xigtay warbixinno dhowr ah, Old Lady ayaa ka fiirsaneysa xiddigii hore ee Real Madrid kaasoo arki doona qandaraaskiisa oo dhacaya June 2022.
Sida Il Corriere dello Sport, haddii Juventus ay go’aansato inay iibiso weeraryahanka, waxay u baahnaan lahaayeen inay sameeyaan ugu yaraan € 29m si looga fogaado inay khasaaro soo gaarto.
Bianconeri ayaan ka fiirsaneynin qandaraaskiisa waqtigan la joogo.
Nasiib wanaag, wali waxaa jira sanad qandaraaskiisa Ronaldo, marka waxaan heysanaa waqti aan kula hadalno. Taasi muhiimad ma leh hadda, ”ayuu yiri Juventus ‘FCO Fabio Paratici ka hor kulanka Juventus ee Champions League ee ay la ciyaarayeen Porto Talaadadii.
Ronaldo ayaa ku biiray kooxda Juventus lacag dhan 120 milyan euro xagaagii 2018.
Waxa uu dhaliyay 27 gool 32 kulan oo uu u saftay tartamada oo dhan xilli ciyaareedkan waxaana uu dhaliyay 92 gool 121 kulan uu la ciyaaray Bianconeri tan iyo markii uu yimid Turin.